ရေစက်ဆုံတတယ် ဆိုတာ ဟုတ်ပါ့မလား… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » ရေစက်ဆုံတတယ် ဆိုတာ ဟုတ်ပါ့မလား…
ရေစက်ဆုံတတယ် ဆိုတာ ဟုတ်ပါ့မလား…
Posted by Ko out of... on Feb 19, 2012 in Think Different | 19 comments
လူတွေ အိမ်ထောင်ပြုကြတာ များသောအားဖြင့် ရေစက်ဆုံလို့ပေါ့ကွာ၊ မမြင်ရတဲ့ အတိတ်ဘ၀က ကံ အကျိုးပေးပေါ့ကွာဆိုပြီး သူများပြောလို့ လိုက်ပြောနေကြတာများတယ်။ တကယ်လည်း သူတိုမြင်လားဆို တော့ မမြင်ကြပါဘူး။
ဒါဆို ကျွန်တော်တခုမေးကြည့်မယ်- ပညာလည်းမရှိ၊ ပစည်းဥစာလည်းချို့တဲ့၊ ရုပ်ရည်ကလည်း မလှမပဆိုပါတော့ အရင်ဘ၀က ရေစက်ကြောင့်ပါဆိုပြီး ဘယ်သူမှ မျက်စိမိတ်ပြီး အိမ်ထောင်မပြုပါဘူး…
တခုခုကို ကြည့်ပြီး ရွှေးချယ်မှာပါ…
ဒါတချက်ပေါ့နော် . နောက်အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေလို့ အိမ်ထောင်ကွဲတယ်ဆိုပါတော့
ဒါလည်း ဒို့ အရင်ဘ၀က ရေစက်ကုန်လို့၊ ကံကုန်လိုဆိုပြီး ဘယ်သူမှ လွယ်လွယ်နဲ့ အိမ်ထောင် မကွဲချင်ကြပါ ဘူး။ စီးပွါးရေးကြောင့်လား၊ လူမှုရေးဖေါက်ပြန်လို့လား၊ အပျော်အပါးတွေကြောင့်လားစသည်ဖြင့် ဒီဘ၀မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာတွေကြောင့်ပါ။
ဒါကိုမြင်နေ သိနေရဲ့သားနဲ့ မမြင်ရတဲ့ နေရာကို လက်ညိုးထိုးပြီး ပြောနေကြတာ အကျိုးလည်းမများပါဘူး။
လက်ရှိဘ၀မှာ သူဘာဖြစ်နေလည်း ဘာကူညီပေးသင့်သလည်းဆိုတာ သုံးသပ်နိုင်ရင်တော့ လူတွေ အတွက် အကျိုးပိုများပါတယ်….
ဥပမာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်တဲ့လူတွေဆိုတာလည်း ငါအရင်ဘ၀က အကုသိုလ်ကံဆိုးအကျိုးပေးချိန်ရောက် ပြီဆိုပြီး ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ အဆုံးမစီရင်ပါဘူး။ ဒီဘ၀မှာ ပြသနာ တခုတခုကြောင့်ပါလို့ပြောချင်တယ်…
မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးခေါ်တတ်ပြီး လူသားတွေကို စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ…
စာရိတ(စာရိတ်တ)=ဆောင်သီလ ၊ ၀ါရိတ(၀ါရိတ်တ)=ရှောင်သီလ နှစ်ခုမျှတအောင်ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေ…
အနော်က ရေစက် တဂယ် ဆုံ၊ မဆုံတော့ သိဘူး .. ။
သို့ပေသိ အနော်တို့ရွာက အရှေ့ပိုင်းက ရေစက်နဲ့ အနောက်ပိုင်းက ရေစက်ကတော့ တစ်ခါမှ ဆုံဖူးဘူး …
မိဘကို ရန်ဖြစ်ခိုင်းတယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့နော်..
ကျွန်တော်တွေးမိတာကျတော့… မိဘတိုင်းလဲ အားလုံးတော့ မမှန်နိုင်ဘူးထင်တယ်….ဘာဖြစ်လည်းဆိုတော့ …ဘုရားထက်သိတဲ့ မိဘဆိုတာမရှိ လို့ ကျွန်တော်တွေးကြည့်တာပါ…
နောက်ပြီး ကံကိုယုံ ဆူးပုံမနှင့်နဲ့ ဆိုတာလည်းကြားဖူး
နောက်တခုကျတော့…ကံထားရာနေ ကံစေရာသွား အားလုံးဟာ ကံ တရားအတိုင်းဘဲ လို့လည်း ဖတ်ရဖူးတယ်။ ကျွန်တော် ထင်တာ ဒါတွေဟာ အမြင် မပြတ်သားတဲ့ ကပြား အမြင်တွေဘဲ…
ဘာဖြစ်လည်းဆိုတော့ ဘုရား နှစ်ခွ ဖြစ်တဲ့ စကားကို မပြောဘူး… တစ်ခွန်းတည်းသော စကားကိုသာ ပြောသူဖြစ်တယ်… ဘုရားစကားဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာလည်း နှစ်ပေါင်းကြာပြီဆိုတော့ စိစစ်ရမှာပေါ့နော်… ဒါကျွန်တော် တွေးမိတာ လေးတွေပါနော… ကျေးဇူး….
လက်ရှိဘ၀မှာ သူဘာဖြစ်နေလည်း ဘာကူညီပေးသင့်သလည်းဆိုတာ သုံးသပ်နိုင်ရင်တော့ လူတွေ အတွက်
ရေစက်တော့ မသိပါဘူး။ရေမော်တာပျက်နေတယ်ဗျ။ဟိ ဟိ ။just kidding ပါနော်။ကြိုက်၏။
လောကမှာ မမြင်မသိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့လူကိုထိန်းချုပ်ထားတာတွေအများကြီးပါဘဲ။
တစ်ချိုကိစ္စတွေက လက်တွေ့မပြနိုင်တော့ ကိုယ်လဲဥာဏ်မမှီတာမျိုးကြတော့ အချိန်ကုန်ခံပြီး
ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဖက်စောင်းတန်းအပေါ်မှာနားနေတဲ့ ငှက်ကလေး မနက်မှာ တီတီတျာတျာအော်လိုက်တာက.. ယူအက်စ် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာ မုန်တိုင်းဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်ဆိုပါတယ်..။
သဘာဝတရားဟာ.. ဟန်ချက်ညီညီ/စနစ်တကျနဲ့.. ဗရမ်းဗတာဖြစ်နေတာပါ…
ဒါကို.. တချို့က.. ထာဝရဘုရားရှင်အလိုတော်လို့လည်း ခေါ်ကြတယ်ပေါ့..
မြန်မာတွေကတော့.. ကံတရားဆိုပြီးစ အမည်တတ်ကြတာများပါတယ်..
ဖြစ်ချင်တာတွေ..ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်နေတဲ့.. လောကမှာ..တပ်ချင်သလိုအမည်တပ်.. ဖြစ်ချင်တာတွေက.. ဖြစ်ချင်သလို..ဆက်ဖြစ်နေမှာပါ…
ညဏ်မမှီတာ.. ကံမမှီတာ…. ကံတရား.. ဟိုဟာ..ဒီဟာ.. အကုန်.. ခေးရော့စ်သီအိုရီအရဖြစ်ပါကြောင်း…
မာလုကျ ပုတ္တ.. ထိုအကြောင်း ကိုအဘယ့်ကြောင့် ငါမဟောကြား သနည်း။ မာလုကျပုတ္တ..ထိုအကြောင်းသည် အကျိုးစီးပွား နှင့် မစပ်..မြတ်သော သာသနာတော် ၏ အစအနမျှလည်း မဖြစ်..၀ဋ်ဆင်းရဲကို ငြီးငွေ့ခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ရာဂကင်းခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ရာဂ ချုပ်ခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ကိလေသာမီးငြိမ်းအေးခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ထူးသောဥာဏ်ဖြင့် သိခြင်း ငှာမဖြစ်နိုင်..သစ္စာလေးပါးကို သိခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ချုပ်ငြိမ်းခြင်းငှာမဖြစ်နိုင်..ထို့ကြောင့် ထိုအကြောင်းအရာကို ငါဘုရား မဟောကြား…..
မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး၏ အဂ္ဂိဝစ္ဆသုတ်၊ မာလုကျပုတ္တသုတ်၊ ယမကသုတ်၊ တခြား ဒိဌိဖြုတ်သုတ္တန်များဖြစ်ပြီး ရှေ့ဘ၀ နောက်ဘ၀ အယူများကို တင်ပြထားပါသည်။
သုတမယ၊ စိန္တာမယ၊ ဘာဝနာမယ အကျင့်တရားတို့ဖြင့် နားလည်ထားမည့်အမြင်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
habitual perception ထက်ကျော်လွန်သော အမြင်မျိုးဖြစ်လေသည်။
မိမိလောဘ၊ ဒေါသ၊ သောက မည်မျှ စွန့်လွှတ်နိုင်မှု သလဲ ဆိုခြင်းသည် သာ အမှန်တရားမှတ်ကျောက်ဖြစ်လေသည်။
နဲနဲလောက် ဆရာကြီး ၀င်လုပ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်နော်၊
ဒါမှမဟုတ် မရှိဘူးလားတဲ့၊ အဲသည်လိုမေးတယ်ပြောပါတယ်။
ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကို အစွန်းထွက်တဲ့အမေးလို့ ရှေးဆရာများသုံးကြပါတယ်။(ရှေ့တိုးထပိုး နောက်ဆုတ်လှည်းတုတ်ဆိုသလိုပေါ့)
ဆိုပါတော့ နောက်ဘ၀ရှိတယ်ဆိုရင်၊ သသ်သတဒိတ်ဌိ တဲ့။ မရှိပါဘူးဆိုရင် ဥစ်ဆေဒဒိတ်ဌိတဲ့။
ပြောချင်တာက တစ်ခါတစ်ခါ တချို့ကိတ်စတွေက အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးမှာပေါ့ အခန့်မသင့်ရင်
မသိလိုက်ဘဲနဲ့ အစွန်းဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲလိုပြောလို့ မတွေး-မပြောရဘူးမဟုတ်ပါ၊
အစွန်းထွက်တော့ငြိတယ်ပေါ့နော၊ အစွဲဖြစ်တော့ ဒိတ်ဌိဖြစ်တယ်ပေါ့နော။
ရေစက်တော့ တိဝူး မိုးစက်ပဲတိဒယ် ….
၇ခါတိတိ လက်ထပ်ယူရတာ ရေစက်လားဟင်င်င်….
၇ခါမှာ ၁ခါလောက် နာ့ကိုယူတော့ ဘာဖစ်မှာကျနေဒါဘဲ…
ကြီးမိုက်က တစ်လနေမှ ရေချိုးတာမဟုတ်ဘူး
တခါတလေ ဥာဏ်မမှီတဲ့ ကိစ္စ တွေကို
“မာလုကျ ပုတ္တ.. ထိုအကြောင်း ကိုအဘယ့်ကြောင့် ငါမဟောကြား သနည်း။ မာလုကျပုတ္တ..ထိုအကြောင်းသည် အကျိုးစီးပွား နှင့် မစပ်..မြတ်သော သာသနာတော် ၏ အစအနမျှလည်း မဖြစ်..၀ဋ်ဆင်းရဲကို ငြီးငွေ့ခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ရာဂကင်းခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ရာဂ ချုပ်ခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ကိလေသာမီးငြိမ်းအေးခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ထူးသောဥာဏ်ဖြင့် သိခြင်း ငှာမဖြစ်နိုင်..သစ္စာလေးပါးကို သိခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်..ချုပ်ငြိမ်းခြင်းငှာမဖြစ်နိုင်..ထို့ကြောင့် ထိုအကြောင်းအရာကို ငါဘုရား မဟောကြား…..”
မဆိုင်တာတွေ စဉ်းစားရင်း အတွေးတွေ ချော်သွားမှာစိုးတဲ့အတွက် ဘုရားမဟောခဲ့တာကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တထွာ တမိုက် ဥာဏ်နဲ့ မဆင်ခြင် ကြရင် အကောင်းဆုံးပါ။
သိလို့လဲ အကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ အငြင်းပွါးရတာဘဲ ရှိမယ်။
သေချာတာ က တော့ အဲလို မျိုးရေစက်ဆုံအောင် တစ်ယောက်ယောက် က ဖန်တီးပေးနေတာတော့ မဟုတ်ဘူး..။ ရေစက်ဆုံအောင်ပဲ ကိုယ်က လုပ်တာ ကိုယ်က လုပ်ခဲ့တာ ကိုယ်ကလုပ်နေခဲ့တာ… ပေါ့..။
ဒါနဲ.. စကားမစပ်.. ကျွန်မ တို့သိတဲ့ အစ်မကြီးတစ်ယောက် သိတတ်ကတည်းက ထီပေါက်ချင်လို့ ထီထိုးလာခဲ့တာ သေသာသွားတယ် ထီပေါက်မသွား ဘူး အဲဒါဘာကြောင့်လဲ..။ လစဉ်လည်း ထိုးပါရက်နဲ..။ ?????
ထီမပေါက်တာဟာ… အရှိတရားပေါ်အခြေမခံတဲ့ စိတ်ကူးရင်သက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒါတွေဟာ မသေချာပါဘူး… ထီပေါက်ခဲ့ရင် လည်းတိုက်ဆိုင် မှုလို့ဘဲမြင်ပါတယ်… ထန်းသီးကြွေခိုက် ကျီးနား ခိုက်၊ ချိန်းလိုက် ရင်လွှဲ ဦးမယ် ဆိုတာတွေပေါ့…
ယခုခေတ်မှာ ..အရှိတရားပေါ် အခြေခံတဲ့ .. လူအား၊ငွေအား၊ ပညာအား စသည်စသည် အရင်းနှီးရှိတာ တောင်မှ အမြတ်ရဖို့ မသေချာသေးပါဘူး… အရှိတရားပေါ် အခြေမခံတဲ့ စိတ်ကူးရင် ကံစမ်းမဲတို့၊ ထီထိုးတာတို့ ၊ ဗေဒင်ယတြာ တို့ ဆိုတာတွေဟာ လူ့အသိကို မတိုးပွါးစေတဲ့ အပြင် လူတွေကို အညွှန့်တုံးစေပါတယ်လို့ဘဲ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ပြန်လည် တင်ပြပါရစေ…..
ကံကို ယုံပြီးဆူးပုံတော့ မနင်းလိုက်ပါနဲ့ ဗျာ။
အလကားပါ .. လူတွေ ပါးစပ်ကသာ ရေစက် ရေစက်နဲ့ … အသုံးလှအောင် .. ဘယ်စာရေးစရာထွင်ခဲ့တဲ့စာလုံးမှန်းမသိဘူး … ။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ပေါင်းသင်းဖို့ အိမ်ထောင်ကျဖို့ဆိုတာ … ပုံသေကားချပ်တော့မဟုတ်ဘူး … ။ မှန်းထားပေမယ့် .. ဖြစ်မလာတာမျိုးလည်း ရှိတယ် .. ဒါဆိုဘာလို့ပြောမလဲ.. ရေစက်မဆုံဘူးလို့ ပြောဦးမလား ….။
လူ့လောကသဘာဝအရ .. အဆင်ပြေတဲ့ လူနဲ့ ယူကြတာပါပဲ … ၊ အကြောင်းမတိုက်တော့လည်း ကွဲပေါ့ … ။ ဒါကြောင့် … ရေစက်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို အယုံကြည်လုံးဝမရှိပါကြောင်း ………….. ။